Patronpath ဝဘ်ရောက်ရှိခြင်းအသစ်ကိုစတင် | Martech Zone
Patronpath Web အသစ်ရောက်ရှိနေပြီ
သောကြာနေ့, မေလ 2, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါပထမ ဦး ဆုံးမှာငှားရမ်းထားခဲ့သည်အခါ နာယက၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာကျွန်တော်အရမ်းထိတ်လန့်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည် flash သက်သက်သာသာ၊ စာမျက်နှာများမရှိပါ၊ နောက်ခံကောင်းမွန်သောအရာ (SWFObject ကိုဖွင့်ထားသော်လည်း)၊ အကြောင်းအရာကိုမွမ်းမံရန်နည်းလမ်းများ…အားလုံးနီးပါး၊
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုပြန်လည်မပေးသောကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များသည့်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုက်ကိုပြုစုသောအေဂျင်စီထံကျွန်ုပ်ချဉ်းကပ်သောအခါတောင်းပန်မှုမရှိခဲ့ပါ။ တကယ်တော့ငါ SEO အကြောင်းတိုင်ကြားတဲ့အခါ, သူတို့က site ကိုပိုကောင်းအောင်အခြားစျေးကြီးတဲ့စာချုပ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဒါကနောက်ဆုံးကောက်ရိုးပဲ! သြတ္တပ္ပစိတ်ရှိသည့်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမျှမည်သူမျှရှာမတွေ့နိုင်သော site တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
တစ် ဦး rant ၏လုံလောက်သော! မာ့ခ်ဂါလိုနဲ့ကျွန်မတို့ဟာကျွန်မတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိတ်ဖက်များ Kristian Andersen မှာလုပ်ပြီးသူတို့နဲ့အတူအကောင်အထည်ဖော်မယ့်ကျွန်တော်တို့အတွက် site တစ်ခုဖန်တီးခိုင်းတယ် Imavex ၏အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။ Kristian သည်သူ၏အဖွဲ့အစည်းတွင်မယုံနိုင်လောက်သောစွမ်းရည်ရှိသည်။
ဒီ layout ကိုမဖြေရှင်းခင်မှာ site ၏ကြားမှာအနည်းငယ်သောကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာသည့်အားသာချက်များကိုပြောဆိုနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
ယခုဆိုဒ်အသက်ဝင်နေပြီး၎င်းသည်အလွန်လှပပြီးသွားလာရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ (သင်စဉ်းစားမိလျှင် - ဟုတ်ကဲ့၊ blogging သည်အနာဂတ်တွင်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်) ဒီနေရာမှာပုံတစ်ပုံ:
ငါတို့ဒါရိုက်တာအသစ်ဖြစ်တဲ့ Marty Bird ကိုငှားရမ်းခြင်းမပြုမီဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါ။ ငါ site ကိုဟောင်းကိုချွတ်ကြပြီမုန်းလိမ့်မယ်။
မေလ 2, 2008 မှာ 9: 01 pm တွင်
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှရည်ညွှန်း။ မရနိုင်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုအတွက်သင့်အားငွေပိုပေးသည့်အေဂျင်စီကဘယ်သူလဲ ??
မေလ 2, 2008 မှာ 10: 12 pm တွင်
မေလ 3, 2008 မှာ 9: 49 pm တွင်
ဂရိတ်ကြည့်ရှုသည့် site Doug ။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းနောက်ထပ် site တစ်ခု (အရိပ်အမြွက်ဖော်ပြချက်) ကိုပြသရန်သင်မစောင့်နိုင်ပါ။ 🙂